Ndị na-ahụ maka akụ na ụba, ndị na-egosi ahia ahia
Mkpa nke ndị na-ahụ maka akụ na ụba
Ihe ngosi akụ na ụba bụ ọnụ ọgụgụ dị oke ọnụ nke na-egosi ntụziaka nke aku na uba. Ihe omuma aku di oke mkpa na-ebughari ugwo ahia ego, ya mere, odi nkpa inwe ihe omuma banyere ihe omumu aku na uba n'uwa dum ka ha nwee ike iji nlezianya di mkpa, nke ga enyere ndi ahia ahia aka ime mkpebi ndi ozo.
Ịkọwa na nyochaa ndị na-egosi ihe dị mkpa nye ndị investors niile ka ha na-egosi usoro akụnụba nke akụ na ụba, na-atụ anya nkwụsi ike ya ma na-enye ndị na-eme ego ohere imeghachi omume na oge iji mee ihe na mberede ma ọ bụ nke a na-atụghị anya ya, nke a makwaara dị ka akụda akụ na ụba. A pụkwara ịkpọ ha 'ngwá agha nzuzo' nke ndị ahịa mgbe ha na-ekpughe ihe ga-abịa n'ihu, ihe a pụrụ ịtụ anya ya n'aka akụ na ụba na nke nduzi ahịa nwere ike iwere.
IHE MGBE ỌTỤRỤ GDP (GDP)
Akuko GDP bu otu n'ime ihe kachasi mkpa n'umu ihe omuma aku na uba, dika o bu nnukwu onu ogugu onodu aku na uba. Ọ bụ ngụkọta nke uru ego niile ngwongwo na ọrụ nile nke akụ na ụba dum na - atụle (anaghị agụnye ọrụ ụwa) .Ọganihu mmepụta akụ na ụba - ihe GDP na - anọchi anya ya, nwere mmetụta dị ukwuu n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla nọ n'ime ya. akụ na ụba. Dịka ọmụmaatụ, mgbe akụnụba dị mma, ihe anyị ga-ahụ bụ obere ọrụ na ụgwọ ọrụ dị ka ụlọ ọrụ na-achọ ọrụ iji zụlite aku na uba. Mgbanwe dị ịrịba ama na GDP, elu ma ọ bụ ala, na-enwekarị mmetụta dị ịrịba ama na ahịa, n'ihi eziokwu bụ na akụ na ụba dị njọ na-apụtakarị ego nkwụnye ego maka ụlọ ọrụ, nke sụgharịrị ego ala na ahịa ahịa. Ndị na-achụ ego na-echegbu onwe ha banyere nnukwu ego GDP, nke bụ otu n'ime ihe ndị na-eji akụ na ụzụ eme ihe iji chọpụta ma akụnụba dị na nlaazu.
NKWUKWU ỤLỌ NCHE ECHICHE (CPI)
Akuko a bu onu ogugu nke onu ogugu. Ọ na-agbanye mgbanwe nke ego nke ngwongwo nke ọrụ na ọrụ site na ọnwa ruo ọnwa. Ekere CPI nke a na - agbanye ego, nke a na - enweta site na ihe ọmụma zuru ezu nke anakọtara site n'ọtụtụ puku ezinụlọ na United States. Nkata ahụ nwere ihe karịrị ụdị 200 nke ngwaahịa na ọrụ dị iche iche dị iche iche: nri na ihe ọṅụṅụ, ụlọ , uwe, njem, nlekọta ahụike, ntụrụndụ, agụmakwụkwọ na nkwurịta okwu na ngwaahịa na ọrụ ndị ọzọ. Nnukwu ihe edere iji wepụta nkọwa doro anya na mgbanwe nke ndụ ga-enyere aka na ndị na-akpata ego nwere mmetụta nke onu oriri, nke nwere ike imebi akụ na ụba ma ọ bụrụ na ejighị ya. Ntugharị na ahịa nke ngwaahịa na ọrụ kacha emetụtakarị ego na-akwụ ụgwọ (ego nke na-enye nlọghachi n'ụdị ịkwụ ụgwọ nke oge oge na nlọghachi nke isi na ntozu okè). A na-atụ anya ka onu ogugu di elu na onu ogugu na-eto eto, ma oburu na onu ogugu ndi eji emeputa nke oma na oru na-ebili ngwa ngwa, ndi na emeputa ihe nwere ike inweta uru. N'aka nke ọzọ, ịgha ụgha nwere ike ịbụ ihe na-ezighị ezi na-egosi nkwụsị nke ngwa ahịa.
CPI bụ ma eleghị anya na ihe kachasị mkpa ma bụrụ ebe a na-ahụ maka akụ na ụba ma ọ bụ ihe a kacha mara amara iji chọpụta ọnụahịa nke mgbanwe ndụ. A na-eji ya emezi ụgwọ ọrụ, uru ezumike nká, ụtụ isi ụtụ na ihe ndị ọzọ dị mkpa maka akụ na ụba. Ọ nwere ike ịgwa ndị investors ihe nwere ike ime na ahịa ego, nke na-ekere òkè ma kpọmkwem na-anọghị na mmekọrịta ahịa.
NKWUKWU ỤLỌ ỤLỌ ỤLỌ NNA (EME)
Tinyere CPI, a na-ahụ akụkọ a dị ka otu n'ime ihe ndị dị mkpa nke onu oriri. Ọ na-atụle ọnụahịa nke ngwongwo na ọkwa ọkwa. Dị ka ọdịiche dị na CPI, NI na-atụle ọtụtụ ndị na-emepụta ihe na-enweta maka ngwongwo ndị ahụ mgbe CPI na-akwụ ụgwọ nke ndị na-azụ ahịa na-akwụ maka ihe ndị ahụ. Ihe kachasị njọ n'anya ndị investors bụ ikike nke PPI iji kwuo CPI. Nzuzi bụ na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu na-aba ụba nke ndị ahịa na-enweta ga-agafe ndị ahịa. Ụfọdụ n'ime ike nke PPI bụ:
Ọtụtụ ihe ziri ezi nke CPI n'ọdịnihu
Long 'akụkọ ihe mere eme' nke usoro data
Ezi ntiwapụ sitere n'aka ndị na-etinye ego na ụlọ ọrụ ndị a nyochara (ntinye, ngwongwo ahịa, ụfọdụ ọrụ ndị
Ị nwere ike ịkwaga ahịa ahịa
A na-enye data na na-enweghị mgbanwe nhazi oge
N'aka nke ọzọ, adịghị ike bụ:
Ihe oriri, dị ka ike na nri nwere ike imechi data ahụ
Ọ bụghị ọrụ niile na aku na uba ka kpuchie
Nke a na-enweta otutu mgbasa ozi n'ihi na ọ na-eleba anya na mgbasa ozi na-eleba anya na nke a nwere ike ile anya dịka onye na-agbagha ahịa ahịa. Ọ bara uru maka ndị investors na ụlọ ọrụ ndị a na-ekpuchi iji nyochaa ahịa na ụgwọ ọrụ.
Akuko a juputara ngwongwo n'inwu ahia n'ime ulo oru ntanye ahia na o bu ihe omuma nke ulo ahia ndi ozo n'uwa dum. Ọ na-egosipụta data site na ọnwa gara aga. A na-eji ụlọ ọrụ dị iche iche eme ihe na nyocha ahụ, site na Wal-Mart ka ndị ọrụ onwe ha, obere ụlọ ahịa obodo. Dị ka nnyocha ahụ ga-ekpuchi azụ ahịa nke ọnwa gara aga, ọ na-eme ka ọ bụrụ ihe ngosi oge na-egosi ọ bụghị nanị na arụmọrụ nke ụlọ ọrụ dị mkpa a ma ọ bụ ọrụ ọnụahịa dịka dum. A na-ewere ahịa ịzụ ahịa dị ka ihe nkwụkọ ọnụ (metric nke na-egosi ọnọdụ ọnọdụ akụ na ụba ugbu a n'otu mpaghara) dị ka ọ na-egosipụta ọnọdụ akụnụba ugbu a, a na-ewerekwa ya dịka ihe ngosi dị mkpa nke ntinye ego, nke na-emepụta nnukwu mmasị site na Ndị nche Wall Street na Board Review Board nke na-edekọ data maka ndị nduzi Federal Reserve Board. Ntọhapụ nke mkpọsa ahịa mkpọsa nwere ike ime ka ọnụ ọgụgụ dị ala karịa ahịa.
Ngosipụta ya dị ka onye na-ekwu banyere nrụgide inflationary nwere ike ime ka ndị na-achụ ego chebaa na ọ ga-abụ na nri Fed ma ọ bụ hikes, dabere na ntụziaka nke usoro ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ọganihu dị mkpirikpi n'etiti ahịa azụmahịa nwere ike ịmalite na njem dị mkpirikpi site na Fed na olileanya nke igbochi onu oriri. Ọ bụrụ na ọnụahịa mkpọsa na-adaba ma ọ bụ na-egbu oge, nke a pụtara na ndị na-azụ ahịa adịghị etinye aka na ọkwa ndị gara aga ma nwee ike ịpụta mgbapụta n'ihi ọrụ dị mkpa nke onwe onye na-arụ ọrụ na ahụ ike nke aku na uba.
Ihe ọkwa kachasị mkpa na-eme na Friday mbụ n'ọnwa ọ bụla. Ọ na-agụnye ụkọ ọrụ na-enweghị ọrụ (pasent nke ọrụ ọrụ na-enweghị ọrụ, ọnụ ọgụgụ nke ọrụ e kere eke, nkezi awa na-arụ ọrụ kwa izu na ego nrite nke awa). Akụkọ a na-ebutekarị ọmarịcha ahịa ahịa. Akụkọ NFP (Ngalaba Ugbo Ogbaghara) bụ ma ọ bụ akụkọ nwere ike kachasị ukwuu ịkwaga ahịa. N'ihi ya ọtụtụ ndị ọkachamara, ndị ahịa na ndị na-achụ ego na-atụ anya nọmba NFP na usoro ntụziaka ọ ga-akpata. Ya na ọtụtụ ndị na-ekiri akụkọ a na ịkọwa ya, ọbụlagodi mgbe ọnụ ọgụgụ ahụ ruru na atụmatụ ahụ, ọ nwere ike ime ka ọnụ ọgụgụ dị ukwuu.
Dị ka ihe ndị ọzọ na-egosi, ọdịiche dị n'etiti data NFP ahụ na atụmatụ ndị a na-atụ anya ga-ekpebi njedebe nke data na ahịa. Na ntinye ugbo ala na-agbasawanye, ọ bụ ezi ihe na-egosi na akụ na ụba na-eto eto ma na-agbanwe. Otú ọ dị, ọ bụrụ na mmụba na NFP na-eme ngwa ngwa, nke a nwere ike ibute mmụba na onu oriri.
IHE NDỊ NA-ECHICHE NA-ECHICHE (CCI)
Dị ka aha ahụ na-egosi, akara a na-atụle obi ike nke ndị ahịa. A kọwapụtara ya dị ka ogo nke nchekwube na ndị na-azụ ahịa nwere n'ọnọdụ ọnọdụ akụ na ụba, nke egosipụtara site na ndị na-azụ ahịa na-azọpụta ma na-emefu ọrụ. A na-emepụta ihe ngosi akụ na ụba a na Tuesday ikpeazụ nke ọnwa ahụ, ọ na-egosikwa otú ndị mmadụ si enwe obi ike banyere nkwụsi ike nke ego ha nke nwere mmetụta dị mma na mkpebi akụ na ụba ha, na okwu ndị ọzọ, ọrụ mmefu ha. N'ihi nke a, a na-ahụ CCI dị ka isi ihe na-egosi maka ọdịdị akụ na ụba.
A na-eji nha ahụ egosi ihe oriri nke ụlọ ọrụ buru ibu na Federal Reserve na-ekiri CCI mgbe ị na-achọ mgbanwe mgbanwe ọnụ.
Gbanyụọ ndị ọrụ mma
Akụkọ a na-atụle ego ole ndị mmadụ na-eji na-azụ ahịa azụ oge (ngwaahịa ndị a na-atụ anya na ha ga-adịgide karịa afọ 3) ma ọ nwere ike inye ụfọdụ nghọta banyere ọdịnihu nke ụlọ ọrụ na-emepụta ihe. Ọ bara uru maka ndị investors ọ bụghị naanị na ọnụ ọgụgụ nke usoro iwu, kama dị ka ihe ịrịba ama nke achụmnta ego ka dum. Ihe ngwongwo ego na - anọchi anya nkwụnye ego nke ụlọ elu nke ụlọ ọrụ nwere ike ime ma gosipụta obi ike na ọnọdụ azụmahịa, nke nwere ike iduga n'ịbawanye ahịa na ịmalite inye aka na ngwongwo n'ọtụtụ awa ọrụ na ịkwụ ụgwọ ụlọ. Ụfọdụ n'ime ike nke iwu iwu na-adịgide adịgide bụ:
Ezi ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ
Data nyere raw na na mgbanwe oge
Na-enye data dị n'ihu dị ka ngwongwo ndetu na azụmahịa ọhụrụ, nke na-agụnye ụgwọ ọrụ n'ọdịnihu
N'aka nke ọzọ, adịghị ike ndị a pụrụ ịmata bụ:
Ntụle nnyocha ahụ adịghị ebu nhazi ọkọlọtọ nke nyocha iji chọpụta njehie
Nnukwu ọnọdụ; a ghaghị iji ụda ọkpụkpụ mee ihe iji chọpụta ọnọdụ ogologo oge
Akụkọ n'ozuzu ya na-enyekwu nghọta na sistemụ ọkọnọ nke ọtụtụ ndị na-egosi ya, ọ pụkwara ịba uru dị ukwuu n'inyere ndị na-etinye ego aka ka ha chee na inweta ego nwere ike ịbụ ndị ọrụ kachasị anya.
Ụbọchị ezipụ nke akara ngosi a bụ ụbọchị abụọ nke Wednesday tupu Kọmitii Open Market Market (FOMC) na-ezukọ na ọnụego mmasị, oge asatọ (8) kwa afọ. A na-eji okwu 'Beige Book' mee ihe maka akụkọ Fed Nchịkọta nke Commentary na Economic Economic Ọnọdụ site Federal Reserve District.
Akwụkwọ Beige n'ozuzu ya gụnyere akụkọ sitere na ụlọ akụ ma jụọ ndị ahịa akụ, ndị ọkachamara n'ahịa, wdg, ma jiri ya mee ka ndị òtù ahụ mara mgbanwe banyere ọnọdụ akụ na ụba nke nwere ike ime kemgbe nzukọ ikpeazụ. Mkparịta ụka ndị a na-enwekarị bụ ndị ahịa ahịa, ụgwọ ọrụ na nrụgide ego, ịzụ ahịa na ọrụ ecommerce na arụpụta ngwaahịa. Ihe dị mkpa akwụkwọ akwụkwọ beige na-eme ka ndị na-etinye ego tinye ego bụ na ha nwere ike ịhụ ihe ndị na-atụ anya n'ihu ma nwee ike inyere aka n'ịkọwapụta ihe ndị ahụ ma na-atụ anya mgbanwe n'ime ọnwa ole na ole na-esote.
Mmasị mmasị bụ ndị isi na-eduzi ahịa ahịa ahụ na ihe niile gbasara akụ na ụba ndị a kpọtụrụ aha na-ele anya na Kọmitii Open Market Committee na-ele anya na iji chọpụta oke ndụ nke akụ na ụba. Nri ahụ nwere ike ikpebi ma ọ bụrụ na ha ga-agbada, ebili ma ọ bụ hapụ ọnụọgụ ego na-agbanweghi agbanwe, ha niile dabere na ihe akaebe a gbakọtara na ahụike nke aku na uba. Ịdị adị nke uru ọnụahịa na-enye ndị na-agbaziri ego ume ịkwụsị ego ozugbo kama ichere iji zọpụta ego iji zụọ ihe. N'ịkụda ọnụ ọgụgụ ọmụrụ nwa ahụ, ndị ọzọ nwere obi ụtọ bụ ịgbaziri ego iji mee ka ị zụrụ nnukwu ihe, dịka ụlọ ma ọ bụ ụgbọala. Mgbe ndị na-azụ ahịa na-akwụ ụgwọ maka ọmụrụ nwa, nke a na-eme ka ha nwekwuo ego ha ga-eji emefu nke nwere ike ịmepụta ọganihu nke ụbawanye mmefu na akụ na ụba. N'aka nke ọzọ, ọnụego kachasị elu na-egosi na ndị na-azụ ahịa enweghị ego ha nwere ike ịnwụ na ọ ghaghị ịkwụsị azụfu. Mgbe ọnụ ọgụgụ dị elu na ọnụ ọgụgụ ntinye ego dị elu, ụlọ akụ na-akwụ ego ole na ole. Nke a na-emetụta ndị ọkụ azụ, ụlọ ọrụ na ndị ọrụ ugbo ga-egbutala na-eji ihe ọhụrụ eme ihe, si otú ahụ na-ebelata ọrụ ma ọ bụ belata ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ. Mgbe ọ bụla ọnụego nwere mmasị na-arị elu ma ọ bụ daa, anyị na-anụ banyere ego ego gọọmenti etiti (ọnụego ụlọ akụ na-eji agbazinye ego ọ bụla). Mgbanwe na mmasị ọnụego nwere ike imetụta ma onu oriri na mgbapụta. Mgbaba na-ezo aka na ịrị elu na ego nke ngwaahịa na ọrụ na oge, n'ihi n 'ụba akụ na ụba siri ike. Otú ọ dị, ọ bụrụ na a na-emefu ego na-efu, ọ nwere ike iduga nnukwu ike ịzụta. Dị ka a pụrụ ịhụ, ọnụego ọmụrụ nwa na-emetụta akụ na ụba site na ịmalite ịzụ ahịa na azụmaahịa, mmefu ego na ọrụ. Site n'ịgbanwe ego ego gọọmenti etiti, Fed na-enyere aka mee ka akụ na ụba na-adaba na ogologo oge.
Ịghọta mmekọrịta dị n'etiti ọnụma ọmụrụma na akụnụba US, nyere ndị na-etinye ego aka ịghọta nnukwu foto ma mee mkpebi ndị ka mma.
Akuko ahụ gụnyere ọnụ ọgụgụ nke ụlọ ọhụrụ ndị malitelarị n'ime ọnwa ahụ yana ụlọ ahịa dị ugbu a. Ọrụ obibi bụ isi ihe na - akpata mkpali akụ na ụba maka mba ma nwee ezigbo ume akụ na ụba. Enwere ike ịchọta ụlọ ahịa dị ala na ebe obibi ọhụrụ dị ala dị ka ihe ịrịba ama nke akụ na ụba na-adịghị ike. A ga-egosiputa ikikere ụlọ na ebe obibi ụlọ dị ka mgbanwe pasent site na ọnwa gara aga na afọ-afọ. A na-elebanye ụlọ na ụlọ ụlọ anya dịka ndị na-eduzi ihe, a na-ejikwa ọnụ ọgụgụ ụlọ ikike ịmepụta Ndekọ Ụlọ Ọrụ nke US Board (a na-eji ndepụta eme ihe kwa ọnwa iji kọwaa ntụziaka nke mmeghari ego nke ụwa na ọnwa ndị na-abịa). Nke a abụghị akụkọ na-eme ka ahịa ghara ịgha, ma ụfọdụ ndị nyocha ga-eji usoro ụlọ amalite inye aka mee atụmatụ maka atụmatụ ndị ọzọ na-eji ngwaahịa.
Nke a bụ akụkọ ụlọ ọrụ Bureau nke Economic Analysis (BEA) nke na-emepụta ego nke ego nke ụlọ ọrụ na National Income and Accounts (NIPA).
Mkpa ha dị na njikọta na GDP, dị ka uru ụlọ ọrụ siri ike gosipụtara ịrị elu ahịa na ịgba ume ọrụ. Ụlọ ọrụ na-eji uru ha eme ihe iji bulie ego, kwụọ ụgwọ nye ndị na-eketa ego ma ọ bụ na-etinye ego na azụmahịa ha. Na mgbakwunye, ndị investors na-achọ ezigbo ohere ịnweta ohere, ya mere ha na-eme ka ọrụ ahịa ahịa dị elu.
Trade Balance bụ ọdịiche dị n'etiti mbubata na mbupụ nke obodo nyere maka oge nyere. Ndị na-azụ ahịa na-eji ya eme ihe dịka ngwá ọrụ mgbakọ, n'ihi na ọ na-eme ka ha nwee ike ịghọta ike nke akụnụba nke mba na-atụle na akụ na ụba nke mba ndị ọzọ na azụmahịa nke mba dị iche iche.
Nchikota ahia bu ihe choro, ebe uru bara uru putara na ugbo ahia di uku nke na ebubata; ma n'aka nke ọzọ, esemokwu azụmahịa nwere ike iduga ụgwọ ụgwọ ụlọ.
A na-ebipụta ndepụta ahụ kwa ọnwa.
Ngwurugwu omimi a bu ngosiputa onodu aku na uba nke onodu aku na uba, nke ndi mmadu kwuru. Ọ na-agụnye mmetụta nke ahụike ego nke mmadụ ugbu a, ahụike nke akụ na ụba nke ọnụ ọgụgụ obodo na obere oge na amụma banyere ọganihu akụ na ụba ogologo oge.
Enwere ike iji ogwu nwere ike iji mee ka ndi mmadu chee echiche banyere ndi mmadu n'echebara anya.
PMI nke na-erepụta bụ ihe na-egosi ahụ ike akụ na ụba nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka otu mba. Ntọala ahụ dabeere na nyocha nke ndị na-ere ahịa site n'aka ndị isi ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ n'ichepụta ụlọ ọrụ, na-atụle echiche ha banyere ọnọdụ akụ na ụba ugbu a na ọdịnihu.
Nkọwapụta nke Markit na ISM bipụtara, bụ ebe a na-ewere nnyocha ISM dị ka ihe dị mkpa karị.
Nsolite ntinye aka na-eduga n'ịdị ike ego ma na-atụle akara ngosi 50 dị ka ọkwa dị elu, n'elu ọrụ azụmahịa na-arụ ọrụ na ịrị elu na n'okpuru na-arịda.
A na-ebipụta ndepụta aha PMI kwa ọnwa.